Air Pod Apple, Airpod earphones, Airpods-Bluetooth - Yimi
Ucingo: +86 18520868593
Ephathekayo ye-Bluetooth Isilawuli
Indwangu ye-Bluetooth Isilawuli
Sokuheha Amandla Bank
Slim Amandla Bank
Ephathekayo Amandla Bank
Umthamo High Power Bank
QC Amandla Bank
Wireless Amandla Bank
KUNGANI BLUETOOTH SPEAKER lesikahle FOR EZEMIDLALO
Yakhelwe umculo oluyokushukumisela
Siyazi ukuthi ezemidlalo kusho empilweni -Climbing kwakho kwansuku zonke kanye nezinye ezemidlalo kungaba yindlela enhle yokuthuthukisa imfanelo yakho, ukuthuthukisa ukuzethemba kwakho futhi ulahlekelwe isisindo. Futhi siyazi ukuthi umculo kusho, futhi. Umculo kuvimbela monotony kanye curbs ngaphandle iziphazamiso wazi ukuthi ufunani. Isigqi ebhebhezela ezemidlalo yakho. Futhi yingakho ekudaleni isikhulumi engcono wireless inkanuko yethu.
Sihlela bluetooth yethu isikhulumi ukuze uhlangane ezinyakazayo nomculo, ngoba zingcono ndawonye. Uhlobo kunazo ayethanda izikhulumi nabafundisi engenantambo okuyinto Ziningi izinzuzo. Yini enye engcono kunalokhu umqansa ukhululekile noma ugijime? Yilokhu uyoba lapho azikho izintambo futhi izintambo tangling emzimbeni wakho. Nge intandokazi yakho umculo nokudlala, umsebenzi wakho ngaphandle uthola mnandi futhi yayishubile. Kukhona ngisho umsindo yokukhansela bluetooth izikhulumi futhi uthathe izikhulumi ungazama ngenkathi ekhuphuka noma egijima.
Abaningi bluetooth isikhulumi ngisho eziklanyelwe ukusetshenziswa ukuqina, ukuziqhayisa umjuluko-okuhlola, casings ezimangelengele, namabhethri yangaphakathi ukuthi outlast ngisho ukusebenzisa uhlanya kakhulu.
MAYELANA YIMI YEZIMBONI LIMITED
YIMI Industrial Limited yasungulwa ngo 2009 e Shenzhen, China ne ikakhulukazi ukukhiqiza imikhiqizo electronic kuhlanganise bluetooth isikhulumi & amandla ebhange. YIMI ithobela ukuhlinzeka imikhiqizo eliphezulu kanye namasevisi kumakhasimende esekelwe Premium Quality nababonelelayo Inani layo isimiso, ukuze nigcine amakhasimende uhlangabezana amagugu silethwe imikhiqizo yethu.
Imikhiqizo eminingi ukuthi thina akhiqiza yakhelwe ngu R yethu & D Ithimba. imiklamo ehlukahlukene kanye izinketho ithuthukiswe okusekelwe emakethe izidingo / izicelo. Sizoqhubeka ibenze imingcele!
Ezweni ugcwele engekho ezingeni izipikha engenantambo elishibhile ezenziwe, sizibophezele izinga. Sishikile ukuthola indlela engcono kakhulu esingabonisa ahlinzeke amaklayenti bethu ezingabizi eliphakeme umsindo & ephelele umsindo we-stereo kanye nezixazululo ezinengqondo ulungise ngaphandle umhlatshelo izinga lezinhlelo zethu.
izinqubo zethu ukusiza ukuletha consistentand inkonzo aphakeme kumakhasimende ethu. Sihlala funa isixazululo kanye ukuqinisekisa akekho eshiya udumazeke.
Thina ngobuqotho ahlose ukwakha imikhiqizo uzongithanda
umbala dazzle bluetooth isikhulumi
Ukudala a Ambience emnandi kudinga izakhi ezimbili ezibalulekile - ukukhanyisa kwesokudla futhi umculo omnandi.
Thina isici best LED izipikha ze-Bluetooth ne izibani ukuthi i 360 ° lightshow futhi abakhulule oncomekayo quality sound ngesikhathi esifanayo. Lezi izipikha anemisila LED lights ukuthi umjikelezo ngokusebenzisa imibala eminingi kanye ezibukeka zizinhle ngempela - zingabantu ephelele amaqembu ongaphandle, imibuthano wakanisa lapho abangane nomndeni wakho Ungalalela umculo futhi ujabulele imibukiso LED kanye.
Ngaphezu kwalokho , isikhulumi iza ngamandla ebhange umsebenzi ezenza ukuphila kube lula kakhulu kuwe.
Ukubonisa LED amandla yasebhange 10000mah
Idizayini encane & stylish elandela nawe nomaphi lapho uya khona
ngokulingana okuphephile eyakhelwe abasubathi.
Ethula omkhulu umsindo ihlala ngikhipha ukusebenzisa kwakho eziqine.
UFUNA UKUSEBENZA UNATHI
Nanchang Lokuqala Industrial Area, Gushu Xixiang, Baoan District, Shenzhen, China
Iphone Amandla Bank, Ucingo Power Bank, Izibuyekezo-Bluetooth Isilawuli, Fast Ukushaja Amandla Bank, I-Bluetooth Isilawuli Ukuze Car, Big-Bluetooth Izipikha,